Lehilahy Bangladeshita Mahalala Izany Hoe Hanoanana Ka Manome Sakafo Mora Vidy Ho An’ireo Ankizy Sahirana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2016 4:19 GMT
Mpianatr'i Bidyananda mankafy ny sakafo iray-taka (taka: vola ao Bangladesh) . Sary tao amin'ny pejy Facebook 1 Taka Meal. Nahazoana alalana.
Naroso ny sakafo atoandro. Izay 1 dolara monja. Gaga? Niverina tamin'ny andro nampitovy ny vidin'ny soavaly amin'ny tapa-mofo ve isika amin'izao fotoana izao? Tsia, mbola miresaka momba ny ankehitriny isika.
Nanomboka tetikasa mizara sakafo ho an'ireo ankizy zanaky ny sahirana ao Dhaka sy ny faritra hafa amin'ny vidiny iray taka Bangladesh monja (0,013 dolara Amerikana) ny fikambanana atao hoe Bidyananda. Tamin'ny volana Mey no natomboka ny tetikasa, ary tontosaina ao amin'ny distrika enina, anisan'izany Dhaka. Nilaza ny fikambanana fa ankizy sy olona antitra 121.000 no nomena sakafo nanomboka tamin'ny 22 Septambra 2016, ny drafitra dia ny hizara sakafo amin'ny alina 300 farafahakeliny ho an'ireo ankizy niangarana.
Ivon-toeram-panabeazana ho an'ny niangarana ny Bidyananda izay mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny ankapobeny no mandrafitra azy. Manana sampana dimy manerana ny firenena ny ivon-toerana ary ankizy sahirana maherin'ny 750 no mianatra ao. Kishor Kumar Das no tompon-kevitra tamin'ny sakafo iray taka, monina ao an-drenivohitr'i Però, Lima izy amin'izao fotoana izao. Raha nanontaniana momba ny tetikasa izy, dia nanazava tamin'ny Global Voices fa zavatra manokana izany:
Nisy fotoana aho taloha miandry laharana ela be teo anoloan'ny tempoly mba hahazo sakafo kely. Nanapa-kevitra aho avy eo fa raha vao manana fahafahana, dia hamerina ny hatsaram-panahy amin'ireo mila izany. Mandao ny sekoly isan-taona ireo ankizy mahantra. Antony iray tamin'ny tetikasa ny fihazonana azy ireo hianatra. Ny antony iray hafa dia ny hisarihana ireo ankizy hafa hanatevin-daharana ny sekoly.
Na dia milaza aza ny lalàmpanorenana ao Bangladesh fa zo fototra ho an'ny rehetra ny sakafo, mbola marobe ireo olona mandry fotsy isan-kariva. Ny ankizy no tena mora iharan'izany.
Eo amin'ny manodidina ny 400.000 eo ireo ankizy niangarana ao Bangladesh. Eny an-dalambe na any anaty garan'ny fiara fitateram-bahoaka sy lalamby no andanian'ny ankamaroan'ireo ankizy ny alina. Zara raha mahita hohanina izy ireo ary tsy manam-bola hividianana sakafo bebe kokoa. Ho azy ireo no nanombohan'ny tetikasa Bidyananda.
“Nanome vary miaraka amin'ny legioma ho an'ireo ankizy teny amin'ny toby fiantsonan'ny fiara-dalamby izahay tamin'izany andro izany. Nisy lehilahy iray nanatona ary niteny tamin'izy ireo hoe, “Nahoana no mihinana ity sakafo mora vidy ity? Andeha hiaraka amiko, omeko biriyani (vary nendasina miaraka amin'ny hena) ianareo.” Namaly ilay ankizy 10 taona hoe, “Mitondra sakafo ho anay avy any lavitra ireto anabavy ireto ka tsy afaka ny holavinay. Ianao anefa tsy tonga isan'andro eto aminay.” Tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Bidyanondo. Nahazoana alalana.
“Te hanome sakafo ho an'ireo voninkazo kely roanjato aho farafahakeliny”
Nanomboka ny tetikasa tamin'ny ambim-bolan-tsakafon'izy ireo sy ny fanohanana ara-bola avy amin'i Kishor Kumar Das, mpanorina azy ny Bidyananda. Saingy maro ireo hafa nafana fo nanatevin-daharana ny tetikasa nanomboka teo. Ny sasany nanome vola ambin'ny fety tsingerintaona nahaterahany. Ny hafa kosa nanome ny tombontsoan'izy ireo avy amin'ny Eid, raha nanampy ny tetikasa tamin'ny vola saram-pianarana nisasaran'izy ireo mafy kosa ny sasany.
Tsy ny olon-tsotra ihany, fa nisy koa fikambanana iray antsoina hoe Orina Mpanasoa Serverghost izay nanatevin-daharana ny tetikasa. Nanome ny vola rehetra azon'izy ireo tamin'ny loka avy amin'ny Google izy ireo hanampiana ny tetikasa Bidyananda.
Sakafo zaraina ho an'ireo ankizy niangarana. Sary avy amin'ny pejy Facebook-n'ny 1-Taka Meal. Nahazoana alalana.
Nandefa ity hafatra ity tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Bidyananda ny iray tamin'ireo olon-tsotra nanampy tamin'ny fahombiazan'ny tetikasa:
Manana asa tena kely aho, ary kely ny tahirim-bolako. Saingy te hanome sakafo ho an'ireo voninkazo kely (ankizy) roanjato aho farafahakeliny tamin'ny tombony azoko tamin'ny Eid.
Nanambara ny pejy tatỳ aoriana fa ankizy 203 no nahazo sakafo tamin'ny fandraisan'anjaran'izany olona izany.
Iray taka voaangona avy amin'ny ankizy tsirairay. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny 1-Taka Meal. Nahazoana alalana.
‘Te hanafoana ny teny “fiantrana” avy amin'ny rakibolan'ny ankizy aho’
Hoy i Kishor Kumar Das raha nanontaniana ny antony maha-iray taka ny vidin'ny sakafo :
Tsy tianay hiseho toy ny fiantrana na famindram-po ity tetikasa ity. Marobe ireo fanesoana momba izany tamin'ny voalohany, saingy efa manana hambom-po kely ireo ankizy amin'izao fotoana izao. Na dia tsy afaka mandoa vola eo no eo hahazoana sakafo aza ny sasany amin'izy ireo, omen'izy ireo ny ampitso ny vola. Te hanafoana ny teny hoe ‘fiantrana’ avy amin'ny rakibolan'ny ankizy, sy ny teny hoe ‘fanomezana’ avy amin'ny mpanolotra aho.
Matetika ahitana vary sy legioma nasiana tsiron-tsakafo carry ny sakafo. Saingy rehefa misy ny famatsiam-bola, dia indraindray ny sakafo ankafizin'ny ankizy toy ny vary nendasina miaraka amin'ny akoho nasiana carry no azony. Mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny Bidyananda no mikarakara ny sakafo.
Ity tatitra an-dahatsary mikasika ny tetikasa navoakan'ilay mpisera YouTube Video Vubontao:
Noho ny antony isan-karazany, matetika tsy maharitra ela ireo tetikasa an-tsitrapo marobe ao Bangladesh aorian'ny fanombohana mahabe fanantenana. Raha nanontaniana mikasika ny faharetana sy ny fahavitrihan’ ny tetikasa sakafo iray taka, dia hoy i Das:
Maro tamin'ireo tetikasa mitovy amin'izany no natombok'ireo tsy dia nanana traikefa ary mitantana ny tetikasa amin'ny fo kokoa fa tsy amin'ny atidoha. Rehefa miatrika ny zava-misy, mikombona ireo tetikasa ireo indraindray. Indrindra rehefa tsy maintsy mitady fotoana ho an'ny fianakaviana sy ny asa ianao, lasa zavatra miha-sarotra tantanina ny asa soa. Nanomboka izahay rehefa avy nahavita ireo dingana ireo. Zavatra iray hafa koa ny famatsiam-bola. Tokony mahay mitantana ny fikambanana amin'ny alalan'ny fananan'izy ireo manokana ny olona miandraikitra ny tetikasa. Zava-dehibe ny mampandeha ny fikambanana tsy mila fanomezana na fanampiana avy any ivelany mandritra ny taona vitsivitsy. Nafindrako tany amin'ny Bidyananda ny fananako tamin'ny orinasako tao an-toerana mba hiarovana ny vola mandritra ny fotoana maharitra.
Nampidirina tao anatin'ny tetikasa ny fiara mpizara sakafo mba hitantànana tsara kokoa ny fandehan'ny fizarana. Mitondra ireo fiara feno sakafo ny mpilatsaka an-tsitrapo mba hitondra izany any amin'ny toby fiantsonan'ny lamasinina ary mizara izany ho an'ireo ankizy mahantra. Ny nofin'ny mpitarika ny tetikasa indray andro any dia ny hahita izany karazana fiara mpizara sakafo izany manerana ny firenena, mivarotra ny entan'izy ireo amin'ny vidiny iray taka ho an'ireo noana.
Vahiny ao amin'ny hotelin'i Das manampy amin'ny fahandroan-tsakafo ho an'ny ankizy sahirana ao Lima. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny 1-Taka Meal. Nahazoana alalana.
Nisy tetikasa tahaka izany ihany koa natomboka tao an-drenivohitr'i Però, Lima. Zaraina sakafo isan-kerinandro ireo ankizy monina eny amin'ny faritry ny mahantra ao Lima. Mitantana orinasa trano fandraisam-bahiny ao Lima i Kishor Kumar Das. Ampiasaina amin'ny fandaniana amin'ity asa soa ity ny tombombarotra avy amin'izany orinasa izany. Andrahoina ao amin'ny lakozian'ny hotely ny sakafo. Raharahan'ny ekipa ny nahandro, miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny vahiny sy ny mpizahantany ao amin'ny hotely.
Maniry i Das mba hisandrahaka manerana izao tontolo izao ity tetikasa ity. Tsy hisy ankizy hijalin'ny hanoanana intsony. Satria mahatsiaro ny fotoana nitsanganany maharitra manoloana ny tempoly izy. Satria mahatakatra ny fanaintainan'ny hanoanana sy ny noana izy. Izany no antony nahatonga azy te hanampy ny ankizy niangarana.